Blender 2.90 ikozvino yave kuwanikwa nekuvandudzwa kwekuita uye dzimwe shanduko | Linux Addicts
Kwekupedzisira Chikumi, iyo Blender Foundation yakakanda yekutanga LTS vhezheni yesoftware yako. Yenguva Yakareba Rutsigiro vhezheni ndeimwe inotsigirwa kwenguva yakareba kwazvo, iyo inovimbisa kuti ichave yakagadzikana kupfuura dzimwe shanduro. Asi izvi hazvireve kuti kusvika kwemabasa matsva kunomira, uye maawa mashoma apfuura ivo vakatanga Blender 2.90, chimwe chiitiko chakakosha chakauya nekuvandudza kwakawanda kwatinogona kuverenga mu kusunungura chinyorwa.
Pakati peiyi kuvandudzwa, zvinoenderana nemabhenji, isu tine kuita kwakanaka mune angangoitika ese zviitiko, kunyanya mukushandisa kweAgent 327. Pazasi iwe une runyorwa rweakatanhamara emabhuku matsva akasvika neBlender 2.90, pakati payo isu tine akawanda ane hukama nehurongwa hwekutsigira.
Pfungwa dzeBlender 2.90
Embre, kubva kuIntel uye yakavhurika sosi, ikozvino yave kushandiswa ray tracing paCPUs, inovandudza mashandiro.
Intel Open Image Denoise yava kushandiswa mune zvimwe zvikamu.
NVIDIA OptiX rutsigiro rwave kuwanikwa pane ese maNVIDIA GPUs kubva kuMaxwell uye nyowani, apo sepakutanga yaingoshanda paRTX GPUs.
NVIDIA NVLink rutsigiro rweCUDA uye OptiX.
Mucheka sefa basa.
Yakavandudza bhurasho rinoyevedza.
Dzimwe shanduko muchimiro chekugadzirisa zvakajairwa nekuvandudzwa.
Blender 2.90 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune webhusaiti yemunyori, iyo inogona kuwanikwa kubva Iyi link. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha tarball, saka inogona kunge iri sarudzo iri nani yekuisa iyo Snap vhezheni (sudo snap yekuisa blender -classic) Tichifunga nezvekukasika iyo Flatpak vhezheni inovandudzwa, zvinoshamisa kuti haisati yaonekwa mukati. Flathub, asi ichaita kudaro mumaawa mashoma anotevera. Avo vanosarudza kushandisa mavhezheni ezvinyorwa zvepamutemo zvekugovera kwavo Linux vanozofanira kumirira mazuva (kana mavhiki kana mwedzi) kuti vakwanise kutora mukana wenhau dzese muBlender 2.90.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Blender 2.90 ikozvino yave kuwanikwa, nekuvandudzwa kwekuita, kuwanda kwemahara kugarisana pamwe nekumwe kugadzirisa
VLC 4, iyo hombe yekuvandudza iyo ichave yangu yese-in-one kutamba multimedia zvemukati ... kana ichishanda